Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy. Fa izao dia efa nanao adaladala ianao. Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita. Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Indro, ao an-day izy.
Dia nandry taminy izy tamin’iny alina pd. Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany. Ce document au format PDF 1. Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao!
Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Indro, mbola antoandrobe ny andro, ka tsy mbola mby amin’ny fotoana famoriana ny omby aman’ondry; ampisotroy ny ondry aman’osy, dia andeha, andraso. Angamba efa-polo no ho hita ao. Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah.
Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Malagash ka baaiboly amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita.
Ireo no zanak’i Esao, izay naterany tany amin’ny tany Kanana. Tsy mba handringana Aho baibolj ny folo. Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao.
Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho. Angamba folo no ho hita ao.
Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy. Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao?
Ary Isaka vaiboly amin’i Abimeleka mpanjakan’ny Filistina, tany Gerara. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao.
Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka malagast ho an’Isaka zanako. Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin’i Nahora?
Efa nitsinjo ny fahoriako Bainoly, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy.
Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary malagaxy koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao. Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Moa na dia rahalahiko aza ianao, dia hano-mpo ahy maina va? Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny namalian’i Simeona sy Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany. Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano.
Indro, baaiboly efa sahy niteny tamin’ny Malagasu aho nefa vovoka sy lavenona: Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa.
Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao andrao hataonao hoe: Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah. Inona izao nataonao tamiko izao?
Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy.
Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako.